Magaca Oday 60-jir ah Woyanuhu ku dilay Tuulada Sancade ee Gobolka Jarar. | ogaden24
Magaca Oday 60-jir ah Woyanuhu ku dilay Tuulada Sancade ee Gobolka Jarar.
Jan 21, 2017 - Aragtiyood
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar ayaa sheegaya in Ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ka Jooga wadanka Ogadenia ay dil fool xun kagaysteen Tuulada Sancade ee deegaanka Birqod katirsan.
Allaha u naxariistee Odayga ay ciidamada Nabacabka ah ee Woyanuhu kudileen oo da’diisu ahayd 60-sano Jir ayaa magaciisa naloogu sheegay Sheekh Yuusuf Cilmi, oo kamid ahaa waxgaradka caanka ka ah Guud ahaan deegaanka magaalada Birqod oo ay Hoostagto Tuulada Sancade.
Marxuum Sheekh yuusuf ayaa wuxuu aduunka kaga tagay alla ha u naxariistee todoba caruura waxayna ciidanka wayaanuhu dileen asagoo soo arooriyay xoolo kuwiisa oo uu rabay inuu kasoo waraabiyo ceelka Ceel xaar.
Ciidanka wayaanaha ayaa waxay laban laabeen tacadiyadii ay ku hayen shacabka Ogadrniya waxaana marba marka ka danbaysa kasii daraysa dilka xidhayga iyo uusxabaalka lagu hayo shacabka Ogadeniya ee aan waxba galabsan.
Ilaahay waxaan uga baryaynaa marxiimkan inuu ka waraabiyo naxariistii jano ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna uu samir iyo iimaan kasiiyo.